“ အလင်းမှမျက်မမြင်” ဒါရိုက်တာ Gurinder Chadha က Bully Pictures ကိုပူးပေါင်းခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » "ဟုအဆိုပါအလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ်" ဒါရိုက်တာ Gurinder Chadha နိုင်ကျင့်ရုပ်ပုံများပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
"ဟုအဆိုပါအလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ်" ဒါရိုက်တာ Gurinder Chadha နိုင်ကျင့်ရုပ်ပုံများပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Los Angeles - အကောင်းဆုံးအပါအဝင်ရုပ်ရှင်လူသိများဗြိတိန်ဒါရိုက်တာ Gurinder Chadha, အလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ် နှင့် ကွေးအဲဒါလိုပဲဘက်ခမ်း¸နိုင်ကျင့်ရုပ်ပုံများကနေတဆင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အမေရိကန်ကြော်ငြာဈေးကွက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Los Angeles မြို့-based ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအဘယ်သူ၏ရုပ်ရှင်အားလုံးအချိန်ဗြိတိန်ရဲ့အတွေအများဆုံးအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာသူမ၏တဦးတည်းအောင်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို $ 300 သန်းဒေါ်လာစပါးကိုရိတ် Chadha များအတွက်ကြော်ငြာ, branded-အကြောင်းအရာနှင့်အခြားကြော်ငြာ-related စီမံကိန်းများကိုလိုက်လိမ့်မည်။
နိုငျကငျြ့ရုပ်ပုံများအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူယာသုန်သစ်တောသူသည်အဘယ်သူ၏အခွက်တဆယ်ကြော်ငြာမှကောင်းစွာဘာသာတစ်ဦးပါရမီရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုသူမ၏တောင်းဆိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ Chadha နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ နိုငျကငျြ့ရုပ်ပုံများ Dustin လန်းက Black, Morten Tyldum နှင့်အန်းမန်ယူအပါအဝင်အမေရိကန်ကြော်ငြာကမ္ဘာ feature ကိုရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဒါရိုက်တာများမိတ်ဆက်အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုသမိုင်းရှိပါတယ်။
"Gurinder တစ်အလွဖြစ်ပါသည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ"သစ်တောကပြောပါတယ်။ "သူမဟာအမှန်တကယ်ကြှနျမနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံးအားလုံးပါဝင်နိုင်တစ်လောကလုံးကြောင်းဇာတ်လမ်းပြောပြနေတဲ့စတိုင်စုံလင်ခဲ့သည်။ သူမသည် poignancy, ဟာသနှင့်ထိထိမိမိစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအရှေ့နှင့်အနောက်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရောစပ်တစ်မူထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ရာသက်ပန်ဘရုစ် Springsteen ပန်ကာအဖြစ်ကျွန်မအထူးသဖြင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် အလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ်။ ငါရုပ်ရှင်ကိုမြင်သောအခါ, ငါသူမ၏နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ချက်ချင်းခံစားခဲ့ရသည်။ "သစ်တောသူပဲသူမ၏ရုပ်ရှင်လိုပဲဆွဲဆောင်မှု, Related ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူရုပ်ရှင်, စိတ်ခံစားမှုဇာတ်လမ်းပြောပြပါဝင်သော Chadha များအတွက်စီမံကိန်းများကိုရှာနေပါလိမ့်မည်ကြောင်းထပ်ပြောသည်။
အိန္ဒိယနွယ်ဖွားသောသူသည် Chadha, ကင်ညာမှာမွေးဖွားပြီးလန်ဒန်မြို့တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ဘီဘီစီနဲ့သတင်းစာဆရာအဖြစ်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပြီးနောက်သူမအတိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူသူမ၏ပွဲဦးထွက်အောင်, directing လှည့် ငါကဗြိတိသျှပေါ့ဒါပေမယ့် ... Channel ကို4သည်။ ဒါကတော်တော်များများပိုပြီးဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်, အဆိုပါသဲသောင်ပြင်ပေါ် Bhaji, Blackpool မှတစ်ဦး daytrip အပေါ်အာရှအမျိုးသမီးတွေအုပ်စုတစ်စုအပေါ် ဗဟိုပြု. , အကောင်းဆုံးဗြိတိန်ရုပ်ရှင်များအတွက် BAFTA များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ၏လာမယ့်အင်္ဂါရပ်, ဟင်းချက်ဘာလဲ? အဆိုပါ 2000 Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဝေဖန်သူများအနေဖြင့်တစ်ဦးပရိတ်သတ်ဆုချီးမြှင့် shared ။
သူမ၏ 2002 ရုပ်ရှင်, ကွေးအဲဒါလိုပဲဘက်ခမ်း, ဗြိတိန်အတွက်အမြင့်မားဆုံးဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်ဗြိတိသျှငွေကြေး, ဗြိတိသျှ-ဖြန့်ဝေရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အောင်မြင်မှုခံစားခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံများအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးအမည်စာရင်းတင်သွင်း (ဂီတသို့မဟုတ်ဟာသ) နှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံတစ်ခု BAFTA အမည်စာရင်းတင်သွင်းရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်နဲ့နောက်တော်သို့လိုက် သတို့သမီး & တစ်ဖက်သတ်အစွဲ; ပဲရစ်, je t'aime; Angus, Thong နှင့် Perfect Snogging; ဒါဟာအံ့သြဖွယ်လှေနျပွီးနောင် နှင့် Viceroy ရဲ့အိမ်. အလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ် Warner Bros. ရန်စံချိန်-setting ရောင်းချသည့် 2019 Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ၎င်း၏ Premiere အောက်ပါနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဝေဖန်သူများအနေဖြင့်ပီတိပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရေးဆွဲထားပြီး၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏တခြားဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအနက် Chadha 2006 အတွက်ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှန်ဆောင်မှုတစ်ခု OBE ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
Chadha ကြော်ငြာမှသူမ၏ထူးခြားသောရူပါရုံကိုလျှောက်ထားဖို့မျှော်ကြည့်ရှုသည်။ "Advertising ကြော်ငြာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာအာကာသဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ငါသည်ကြော်ငြာတွေယနေ့ထက်ပိုအမျိုးသမီးတွေပိုမိုအစွမ်းထက်အမျိုးသမီးများနှင့်အရောင်တွေအများကြီးမှာမတူကွဲပြားမှုတွေအများကြီးကိုကြည့်ပါ။ ဒါကငါ့ထံသို့ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ "
သူမသည်သူမအတိတ်တွင်ကြော်ငြာအလုပ်လိုက်ရှာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမယ့်သူမကသစ်တောကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်သည်အထိလက်ျာဘက်အခွင့်အလမ်းမတွေ့ရှိဖူးကြောင်းထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့နေ့လည်စာစားအဘို့အတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကြိုက်တယ်ငါ့ကိုဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော်ငြာအမျိုးအစားအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်အကြောင်းအံ့သြစရာချက်တင်ခဲ့" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မကိုလည်းသူက Dustin လန်းက Black နှင့်အတူရှိခဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှင့်အတူသဘောကျခဲ့ပါသည်။ တစ်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ ငါမတူကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. လူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲကျနော်တို့အားလုံးဘယ်လောက်တစ်လောကလုံးကိုပြသသောအရာ, အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အရုပ်ရှင်ကားထဲမှာလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဘာကြော်ငြာအတွက်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
နိုငျကငျြ့ရုပ်ပုံများ ဗင်းနစ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိပါတယ် full-service ကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏တန်းစီဇယား Dustin လန်းက Black, Nico Caicoya, Fredrik Callinggard, Gurinder Chadha, Duane Crichton, Roderick Fenske, အန်းဖလက်ချာ, Anders Forsman, Lauren Iungerich, Ergin Kuke, Justin Simien, တေလာသံမဏိနှင့် Morten Tyldum ပါဝင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ရေးရန် [အီးမေးလျ protected]
ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ကြော်ငြာ ဒါရိုက်တာများ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း တီဗီနည်းပညာ 2019-09-27
ယခင်: DaVinci ခုနှစ်တွင်တညျ့ "Sneaky Pete" အရောင်စတူဒီယိုဖြေရှင်း